Hoggaamiye cusub oo loo magacaaby kursigii Mona Sahlin - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Hillevi Engström blir ny nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, presenterades av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke under en pressträff i Rosenbad i Stockholm. sawir: Maja Suslin/TT.
Hoggaamiye cusub oo loo magacaaby kursigii Mona Sahlin
La daabacay torsdag 2 juni 2016 kl 16.48
Hillevi Engström, ayaa maanta loo magacaabay inay qabato hoowshii ay dhowaantan iska casishay Mona Sahlin ee la xiriirtay howlaha qaran ee ka hor-tagga noocyada kala duwan ee argagixisada.
Hillevi Engström ayaa intaan xilkan loomagacaabin ku howl-galaysay madaxa laanta saxaafadda ee degmada Upplands Väsby. Sidookale siyaasiyaddan ayaa horay uga ahaan jirtay wasiirkii suuqa shaqada 2010-2013iyo wasiirka kaalmada caalamiga 2013-2014 ee dawladdii garabka midig ee Fredrik Reinfeldt.
Engström ayaa howshan bilaabi doonta gabagabada xilliga kuleeylaha.
Hillevi Engström ayaa shirka jaraa’id ka sheegtay oo ay lagu caleema saaray ka sheegtay inay la dhac-san tahay howlihii amuurtan laga soo qabtay, balse ey weli dhiman yihiin howlo fara badan. Halka dhanka kale lagu sheegay shirka-jaraa’id in howlahan xilligii loo dheereeyey illaa iyo inta laga gaareyo bisha jannaayo ee sannadka 2018
Wareeysi ay Hillevi Engström siisay laanta wararka ee Ekot kulan-saxaafadeedkaa dabadii ayay ku sheegtay inay waayo-arag-nimo ballaaran u leedahay howlaha maamullada degmooyinka.
– Waxaan aamin-sanahay inaan waayo-arag-nimo ballaaran u leeyahay. Xeerarka ayaan sidoo kale fahmayaa u deg-san iyo weliba inaan xiriirro ballaaran leeyahay.
– Waxaan oran lahaa in loo baahan yahay wada-shaqeyn oo aan loo baahneyn oo keliya in wax la isku darsado. Iyo weliba in laga faa’iidaysto culimada. Dalkan Sweden waayo-arag-nimo badan ayuu u leeyahay howlahaa, hase-yeeshee waxaa loo baahan yahay sidii dardar hor leh loo gelin lahaa.
Maxaa hor leh oo aad sameeyn doontaan?
– Midda ugu horreeysa waxay tahay sidii wacyi-gelinta loo ballaarin lahaa. Waxaan hubaa in hayadaha adeegga bulshada ee degmooyinkua iyo iskuulladuba u baahan yihiin sidii loo siin lahaa aqoon-kororsi, tusaale ahaan ey dhallin-yarta kula hadlaan ama kula xaajoodaan. Maxaan sameeyn karaa kolka aan dhallaan ka shakiyo inuu dhabbo khalad ah ku taagan yahay. Waana howlo aan aqoon sidaa u ballaaran loo hayn, loona baahan yahay in hayadda maamulka iskuullada iyo hayad goboleedyada caafimaadku ka wada xaajoodaa, sida ay hadalka u digtay.